TSY AZO AFOHEZINA NA ALAVAINA NY FOTOAM-PIASAN’NY LOHOLONA – Sénat de Madagascar
TSY AZO AFOHEZINA NA ALAVAINA NY FOTOAM-PIASAN’NY LOHOLONA
Tsy azo afohezina na halavaina ny fotoam-piasan’ny Loholona raha tsy manao « révision constitutionnelle ». Izany anefa dia misy fepetra toa ny hoe tsy maintsy mandalo eo anivon’ny Parlemanta. Io no anisan’ny nisongadina tamin’ny tafa fohy nataon’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO tamin’ny mpanao gazety ny Alatsinainy 02 desambra 2019 nandritra ny . Tsy nohadinoiny ihany koa ny niresaka momba ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2020 sy ny fijeriny ny fifidianana farany teo. Araho ary ny horonan-tsary.
Tsy azo afohezina na halavaina ny fotoam-piasan’ny Loholona raha tsy manao « révision constitutionnelle ». Izany anefa dia misy fepetra toa ny hoe tsy maintsy mandalo eo anivon’ny Parlemanta. Io no anisan’ny nisongadina tamin’ny tafa fohy nataon’ny Filoha Rivo RAKOTOVAO tamin’ny mpanao gazety androany 02 desambra 2019. Tsy nohadinoiny ihany koa ny niresaka momba ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana 2020 sy ny fijeriny ny fifidianana farany teo. Araho ary ny horonan-tsary.
Publiée par Antenimierandoholona Madagasikara sur Lundi 2 décembre 2019
« Visite de courtoisie de l’Ambassadeur de l’Afrique du Sud au Sénat de Madagascar
TETIBOLAM-PANJAKANA TAONA 2020: Nihaona tamin’ireo Loholon’i Madagasikara ireo mpikambana ao amin’ny CCOC. »